Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “မိုဘိုင်းဖုန်းကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရန်ကုန်အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ Seminar များ MPT မှပြုလုပ်သွားမည်” ♫
♪ “မိုဘိုင်းဖုန်းကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရန်ကုန်အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ Seminar များ MPT မှပြုလုပ်သွားမည်” ♫
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT မှမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မိုဘိုင်းဖုန်းပညာ ဆွေးနွေးပွဲ များ၏အောင်မြင်မှုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံး အနှံ့တွင် မိုဘိုင်းဖုန်း လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော Seminar များပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။သုံးစွဲသူပေါင်း ၂၃,ဝဝဝ ကို ရည်ရွယ်ဦးတည်မည့် အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများအား ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့ အတွင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်ပေါင်း ၆၇ ခုတွင် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။အခမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရမည့် ဤပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ MPT အမှတ်တံဆိပ် သီးသန့် အရောင်းဆိုင်များတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကျောင်း များ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ မှပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်လိုကြောင်းတရားဝင်ဆက်သွယ်လာပါကလည်းထိုနေရာများတွင် SPOT မို ဘိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ စီစဉ်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပေးစေလိုသူများအနေဖြင့် www.mpt. com.mm ဝက်ဆိုက်သို့သွားရောက်ကာ လျှောက် လွှာဖောင်ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူရ မည်ဖြစ်ပြီး ထိုဖောင်ကိုဖြည့်သွင်း၍ အီးမေးလိပ်စာ customercare @mpt.com. mm သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ MPT ၏ Customer Care ဌာနမှလျှောက်ထားသူထံသို့ ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် မည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်နေရာအသေးစိတ်များကို အတည်ပြုပြန်လည် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဟူသည့် MPT ၏ ခံယူချက်နှင့်အညီ MPT မှ စမတ်ဖုန်း များ၏အသုံး ဝင်ပုံများ၊ စမတ်ဖုန်းကိုလွဲမှားစွာအသုံးပြုပါကဖြစ်ပေါ်လာနိုင် သော ပြဿနာရပ်များနှင့် MPT ၏ဝန်ဆောင်မှုများအားအကောင်းဆုံး အသုံးပြုပုံများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုမှုများ ကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်မရည်ရွယ်ဘဲ အသုံးပြုမှုမရှိစေရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်စသည့်အကြံပေးချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr.Koichi Kawase က ''စမတ်ဖုန်းတွေ ရောင်းချရမှုဟာ မြင့်တက်လာပြီး ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဟာလည်း ပိုမိုများပြားလာတဲ့အတွက် MPT အနေနဲ့သုံးစွဲသူတွေကိုအင်တာနက် လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေဖို့လိုလားပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးစွဲသူတွေက တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုလာ တဲ့ ဒီမိုဘိုင်း အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို ထပ်ပြီးတိုးချဲ့စတင်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့လုပ်ဆောင်ခြင်း အားဖြင့် MPT အနေနဲ့ ပိုမိုများပြားတဲ့ သုံးစွဲသူတွေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်လာပြီး ဖုန်းတွေဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်။ အင်တာနက်လုံခြုံရေးတွေဘယ်လို ရှိတယ် ဆိုတာတွေရှင်းပြရင်း ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံးသုံးမလဲဆိုတာပါ မျှဝေနိုင်လာမှာဖြစ် ပါတယ်''ဟုပြောသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော MPT ၏ မိုဘိုင်းဆွေးနွေးပွဲများမှ သုံးစွဲသူခုနှစ်ထောင်ကျော်အား အသိ ပညာများမျှဝေခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ နှင့် မတ်လတွင် MPT မှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး တို့ရှိမြို့နယ် ၂၈ ခုတွင် ဆွေးနွေးပွဲပေါင်း ၅၆ခုပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲများကို ဒေသခံကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်စက်မှုဇုန်များ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကာ MPT အဖွဲ့သားများမှ အကြံဥာဏ်များနှင့် နည်းစနစ်များ ကိုဝေမျှခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုအခါတွင် MPT မှ ပဲခူး၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ မကွေး၊ နေပြည်တော်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ စစ်ကိုင်း၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ တနင်္သာရီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတို့ရှိ မြို့နယ် ၆၇ ခုတွင် မိုဘိုင်းဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထား ပါသည်။ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော seminar များအပြီးတွင် တက်ရောက်သူများ အားစစ်တမ်းရယူခဲ့ရာ 51%က အင်တာနက်လုံခြုံရေးအကြောင်း ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း ဖြေကြားကြပါ သည်။ ထို့ပြင် ''ယူထား''ဆိုသည့်ဖုန်းငွေကြိုတင်ချေးယူနိုင်သည့် အစီအစဉ် ကိုလည်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူ များ၏အကြံပြုချက်အရ မိတ်ဆက် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်ရှိနေရာ ၆ ခုတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး
အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အထက် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆိုဆက်သွယ် တက်ရောက် နိုင်ပြီး MPT အရောင်းဆိုင် ၁ဝ၂ ဆိုင်၏အနီးအနားတွင် ပြုလုပ် သွားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။